प्रचण्डकाे समस्या,अाेलीकाे बाेली
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आजित छन् खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग । सधैँ त प्रचण्डले यिनलाई एमालेभित्रका सबैभन्दा ठूला माओवादी विरोधीमात्र देखे । कहिल्यै यिनीसँग खासै हिमचिम बढाउनु परेको थिएन । अझ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् माओवादी रजगजका बेलामा ओलीको गला बसेको बोलीको महत्व नै थिएन ।
माओवादीविरुद्धका बोलीलाई उखान टुक्काको राजनीति भनेर उनी पनि उडाउने गर्थे । तर, समय सधैँ उस्तै रहेन । तिनै बिरामी र उखाने बूढा एकदम तन्दुरुस्त देखिए । अनि राजनीतिमा फटाफट अघि बढे । नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष पनि जिते, प्रधानमन्त्री पनि कुम्ल्याए । त्यतिमात्र हो र आफ्नै निकट सहयोगी मानिएकी उपाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिसमेत बनाए ।
अहिले सम्झेर ल्याउँदा छक्क पर्छन् प्रचण्ड । कति सजिलै राष्ट्रियता र वाम एकताको नाममा उनले आफैँले बोकेर माओवादीका प्रखर आलोचक कमरेड ओलीलाई देशको सर्वस्वको स्वामी बनाए अनि आफूले भने एउटा उपप्रधान र एउटा गृह मन्त्रालयको तापमा चुपचाप मनको चिसो सेकाए ।
त्यसबेला स्वर्गीय सुशील कोइरालाले बोलेको कुरै नबुझेर आजित भएका प्रचण्ड अहिले ओलीको मुखबाट निक्लेको सुस्पष्ट बोली पनि फेरिएको देखेर चकित बनेका छन् । एमालेले सबैथोक पाउन्जेल एक एक कुरा सम्झने ओलीजी कुर्सी छाड्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै ‘गजिनी’को आमिर खान झैँ अभिनय गर्छन् ।
मानौं, ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कुरो गर्ने बेलामा उनलाई भुल्ने रोगले समात्यो र अहिलेसम्म सबैथोक सम्झे त्यही एउटा कुरा चाहिँ भुलेका छन् ।
सार्वजनिक राजनीतिक अडानका लागि त्यस्तो नाटक गरेका हुन् कि भनेर प्रचण्डले आफ्नो दलको मागसहित प्रधानमन्त्री निवासमा गएर पनि एक्लै भेटे ओलीजीलाई । अरू सबै कुरा राम्रै गर्छन् तर पद छाड्ने समझदारीको कुरा निस्कने बित्तिकै भड्किन्छन् । त्यस्तो ढाँटसँग कसरी सँगै अघि बढ्नु ? त्यसैले पनि उनको मन भरंग बनाएको छ । चुपचाप छाड्ने छाँट भइदिएको भए बजेट पास नहुन्जेल सरकार परिवर्तनको बखेडा उठाउनु पनि पर्ने थिएन । हुनत, वामदेवजी फेरिपनि आश्वासन दिंदैछन्, बजेट पास भएपछि राजीनामा माग्ने भनेर ।
तर प्रचण्डलाई ओलीजीप्रति कुनै विश्वास छैन ।
दुई महिना पहिले पनि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने कुरा राखेका थिए । त्यसबेला पनि कुरो बुझियो अब भात खाऊँ भने, कुरा अघि बढ्नै दिएनन् । भोलिपल्ट वामदेवजीले जसोतसो कुरो मिलाए, नत्र त्यसैबेला शेर बहादुरजीले नबोलाएको हो र ? तर सरकार हल्लाउँदा एकथरी कुरो गर्ने व्यक्ति सरकार बलियो हुँदा कसरी तर्किन सकेका ? आफूभन्दा पनि बढी कुरो फेर्ने व्यक्ति सहन प कति गाह्रो छ प्रचण्डलाई !
अब राष्ट्रियताको धार ओलीको हो र ? ओलीजीलाई त सबैले भारत नजिकको भन्थे ।
प्रचण्डले आफैँले उनलाई बोकेर राष्ट्रिय सरकार बनाए । हुँदाहुँदा अब त चीनको पनि उनै नजिक, भारत पनि उनैसँग झुक्ने, ए बाबा ! कतिसम्म सहनु ? ओली चाहिँ चीनसँग नजिक जाँदा पनि भारत दोस्तीको हात बढाउने, उनलाई भने भारत देखी नसहने । यो पनि तिनै डाक्टरको काम हुनुपर्छ । अनेकौं फत्तुर लगाएर कान भरेजस्तो छ उनको विरोधमा ।
दुई महिना पहिले नै यो समस्या वास्तवमा सिध्याउनु पर्ने ।
उतिबेला पार्टीभित्र टोपबहादुर रायमाझी र शक्ति बस्नेतले सरकारमा बस्न अलि बढी नै चाहना देखाए । कृष्णबहादुर महरा र वर्षामान पुन त त्यति नै बेला आरपार गर्ने मुडमा थिए । तर कुरा अहिले पनि उस्तै छ । उनी दुई यो सरकारलाई ढल्दा आफू पनि पछारिने मनस्थितिमा छन् भने अर्का दुई यो सरकार ढल्दा रुखको हांगो टेकेर कम्तीमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने चाहमा उफ्रिएका छन् । कस्तो गाह्रो निर्णय गर्नपनि ! अलिकति कसैले उछिट्टिने मन बनाउन पा’को छैन उता डाक्टर भट्टराई हात लम्काई हाल्छन् । अब ओल्टे फक्र्यो टोपबहादुर वा कोल्टे फक्र्यो वर्षामान चिप्लेलान् कि भन्ने भय छ ।
वास्तवमा शान्ति प्रक्रियामा आएर जसरी देशको शासन सत्तामा अघि बढ्ने उनले सोच बनाएका थिए सोहीअनुसार काम नभएको पनि हैन । पहिलो संविधान सभाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाएरै छाड्यो । हुनत गिरिजाले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा त्यही बेला पनि झन्डै कुर्सी नछाडेका ।
तर डाक्टरले त्यो सेना प्रमुख कटुवाललाई निकाल्नै पर्ने अड्डी लिएपछि कुरो बिग्रिहाल्यो । कटुवालको फुली तान्न खोज्दा आफ्नै पद गुम्यो, अनि बल्ल बुझे साथीहरूले के ताकेका रहेछन् भन्ने । तर के गर्नु अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी लिएर बसेका उनले अरूलाई दोष दिन पनि त मिलेन ।
प्रचण्डको दिन त त्यहीबेला गडबड भयो जुनबेला त्यस्तो भुसुना एउटा पदम कुवरले समेत उनको दिमाग झन्कने गरी झापड हान्यो । त्यो फुच्चेले ६९ साल मंसीर एक गतेको दिन गालामा हानेको एक थप्पडले जसरी दिमाग रन्किएको थियो अहिले ओलीले त्यस्तै दिमाग रन्काइदिएका छन् । आफू खानसम्म खाने, अनि दिने बेलामा यस्तो नाईंनास्ती !
अब सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त भनेका छन् प्रचण्डले तर त्यो सरकारको नेतृत्व गर्न पनि देलान््जस्तो छैन । नेपाली कांग्रेस त यो सरकारसँग नाता नतोडुन्जेलसम्म न चुपचाप बस्ने हो । एकपल्ट सरकारलाई समर्थन छाडेको घोषणा गर्न नपाई देउवाले उनलाई कनिष्ठ सहयोगी झैँ व्यवहार गर्न थालिहाल्छन् ।
यो भोटको राजनीतिको समस्यानै यही भन्या । भोटको संख्यामा आफ्नो राजनीतिक शक्ति तौलन्छन् सबैजना ।
नेपाली कांग्रेसले अहिले समर्थनै गरे पनि लामो समय पक्कै साथ दिंँदैन । अहिले सुरुमै मधेसी दलको विरोध भइहाल्छ । उनी त सबैभन्दा सशक्त भारत विरोधी भए, कसरी समर्थन आउला मधेसी दलको ? अनि मधेसी दलको बहानामा अन्त्यमा देउवालाई पो सहज हुनेभयो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी । ओलीलाई छाडे देउवा, देउवालाई छाडे ओली । परेन फसाद ? कसरी पछार्ने हो यी दुवैलाई ? गाह्रै पो भयो धत् यो खुला राजनीति त !
कुरो वामपन्थी भोटको पनि छ । एमालेको भाइ भएर बसौं भोटरले पनि अब आउने निर्वाचनमा त्यहीअनुसारको भोट दिन्छन् ।
अझै ओलीजी त मिलेर लडौं भन्लान्, अनि सकिएन त्यत्रो वर्षको त्याग र तपस्या । कहाँ एमालेलाई समेत मिलाएर वाम नेतृत्व लिने सपना, कहाँ एमालेसँग गएर मिल्ुनपर्ने वास्तविकता । कांग्रेसको भाइ भएर मन्त्रिपरिषद्मा बसौँं, फेरी तिनै वामपन्थी भोटर कम्युनिज्म छाड्यो भनेर स्याल हुइयाँ लगाउँछन्, उही एमालेलाईनै फाइदा । अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेसले पनि धेरै बस्न दिंदैन, ओलीले छाड्दै छाड्दैनन् । ओलीजीको पनि उही वामपन्थी भोट हो । सरकार प्रमुख भएर निर्वाचन गराउन पाए प्रथम पार्टी हुने दाउ । नेपाली कांग्रेसको पनि उही दाउ ।
अब जसले लामो समय प्रधानमन्त्री दिन्छ उसैको पछि लाग्नुको विकल्प रहेन । यता गयो खाडी उता गयो बाढी भनेजस्तो अवस्थामा पुगेपछि के गरुन्, के नगरु बिचरा कमरेड प्रचण्ड ?